Uchwepheshe We-Semalt Uxwayisa Nge-Spammers Ebizayo Kakhulu Yezwe. Uphephe!
Uma uthola inamba enkulu yama-imeyili anezixhumanisi ezitolo ze-intanethi noma abantu becela imali, kunamathuba wokuthi u-spammer usuqagele i-ID yakho futhi uqale ukuthumela imiyalezo ekhohlisayo. Engxenyeni yokuqala ka-2011, iningi logaxekile ebhokisini lemilayezo engenayo elivame ukuvela eNdiya. Ngo-2016, amazwe aphezulu okuthumela ogaxekile ayengamaNdiya (20%), i-Indonesia (13%), iRussia (10%) neNingizimu Korea (12%).
U-Nik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo YokuThengela Amakhasimende Semalt , ubheka lapha kumaqiniso anamandla kakhulu mayelana negaxekile yomhlaba.
IRussia iyaziwa kakhulu ngabantu abasebenzisa i-cybercriminals kanye nezigameko ezifana neFacebook. Ngokusho kwe-Trend Micro, eyinkampani eyaziwayo ye-cybersecurity yaseCalifornia, manje i-Russia manje ihamba phambili uma kuziwa ekuhlakalweni kwe-intanethi nakugaxekile - cheapest dedicated servers usa. Umbiko we-Trend Micro wembula ukuthi izenzakalo ezibonakala kakhulu ezifana nokufa okungazelelwe kukaWinney Houston, ukuhlukumezeka komphakathi emhlabeni wonke, nokuLinsanity kwabanikeze abakwa-cybercriminals ngezinto ezintsha zokuxhumana nezenhlalo kanye nemikhankaso yomkhankaso. Kwabasiza ukuba bafake futhi bangenele inombolo enkulu ye-ID ye-imeyili namanethiwekhi ukuze bafinyelele idatha yethu yangasese.
Kuze kube ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili e-spam okuhlosiwe ku-intanethi yenziwa iqembu labantu abangaphezu kuka-100, bonke bangabaseqembu eligaxekile. Igama laleli qembu liyi-Spamhaus. I-Register yayo Ye-Spam Operations (ROKSO) yedatha ye database iye yabangela izinkinga eziningi kubasebenzisi be-intanethi..Eminyakeni embalwa eyedlule, u-spammer wase-Ukraine uthumele izigidi ze-malware nama-virus usebenzisa ubuchwepheshe be-botnet. Umnikazi webhusayithi le-spammer wayenkampanini ye-web hosting yase-China, i-Trend Micro ibike. UMichael Boehm no-Associates kwakuyinkampani yaseMelika, ehlanganisa nenani elikhulu logaxekile. Bathumele ugaxekile ngokuzenzakalelayo namagciwane ku-inthanethi, okwenza izinkinga kubasebenzisi abahlukahlukene. Umgomo wabo oyinhloko kwakuyizinhlu ezifakiwe, futhi baqhutshwa ngaphansi kwegama lebhizinisi namagama.
I-Yair Shalev kwakuyi-spammer ephezulu ephuma eFlorida. Wabambisana nogaxekile we-ROKSO, uDarrin Wohl, ukuthuthukisa ubuchwepheshe ukubhubhisa inani elikhulu lamakhompiyutha namadivayisi weselula emhlabeni wonke. U-Dante Jimenez wayengumdlali wogaxekile wase-US owasebenzisana nabachwepheshe be-cybercriminals nabet botton emhlabeni wonke. Wayebandakanyeka emisebenzini ehlukahlukene ye-botnet spamming futhi wayehamba phambili ekugodleni amaseva kanye namawebhusayithi evelele wezindaba. UPeter Severa wayengumdlali wogaxekile waseRashiya oqeqeshiwe owabhala futhi wathengisa izinhlelo ezahlukene zegciwane-spamming, i-spamware, namabhodlela ezigidi ezigidigidi zamaRandi. Wayebandakanyeka ekubhaliseni nasekukhululeni ama-trojans kanye nama-virus omhlaba. Usebenze nama-spammers ahlukahlukene aseYurophu naseMelika futhi esebenzisana no-spammer wase-US, u-Alan Ralsky.
UMichael Persaud waboshwa yi-FBI ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Wayebandakanyeka ekukhwabaneni okukhulu futhi wabekwa icala lokusebenza okuhlukile kogaxekile. Yambo Financial kukhona omunye ugaxekile wase-Ukraine owabambe iqhaza kuma-cybercrime ahlukahlukene. Wathuthukisa izinhlelo eziningi eziphindiwe futhi wathengisa izigidi zamaRandi. Wabeka futhi i-akhawunti yebhange ekhohlisayo kwi-intanethi futhi weba imali eningi kuma-akhawunti asemthethweni ebhange. Kuze kube manje, lo spammer usolwa ngamacala ahlukahlukene we-cybercrime, kanti i-FBI iyilandela. Ngokushesha, uzoboshwa, kubika i-Trend Micro.